1Sa 21 | Shona | STEP | Zvino Dhavhidhi akasvika Nobhi kuna Ahimereki mupirisiti; Ahimereki akasangana naDhavhidhi achidedera; akati kwaari, "Uri woga neiko, usino mumwe newe?"
Dhavhidhi anotizira Nobhi nokuna Akishi paGati
1 Zvino Dhavhidhi akasvika Nobhi kuna Ahimereki mupirisiti; Ahimereki akasangana naDhavhidhi achidedera; akati kwaari, "Uri woga neiko, usino mumwe newe?"
2Dhavhidhi akati kuna Ahimereki mupirisiti, "Mambo wakandiraira basa, akati kwandiri, `Ngakurege kuva nomunhu unoziva chinhu chebasa randinokutuma naro, nerandinokuraira.' Majaya ndakaaraira kusangana neni pane imwe nzvimbo. 3Naizvozvo zvino, muneiko pano? Ndipei zvingwa zvishanu muruoko rwangu, kunyange zvipi nezvipi zviripo." 4mupirisiti akapindura Dhavhidhi, akati, "Hapana chingwa chinosidyiwa muruoko rwangu, asi chingwa chitsvene ndicho chiripo; kwoga kana majaya akazvidzora kuvakadzi."
5Dhavhidhi akapindura mupirisiti, akati kwaari, "Zvirokwazvo, vakadzi vakadziviswa kwatiri sapanguva dzose kana ndichifamba rwendo; nhumbi dzamajaya dzakanga dziri tsvene, kunyange rwaiva rwendo rwamazuva ose harwo, ndoda nhasi nhumbi dzavo dzichava tsvene."
6Naizvozvo mupirisiti akamupa chingwa chitsvene, nokuti kwakanga kusina chingwapo, asi chingwa chokuratidza, chakanga chabviswa pamberi paJehovha, kuti chingwa chinopisa chiiswepo pazuva rokubviswa kwacho.
7Zvino mumwe muranda waSauro wakanga aripo nomusi iwoyo, anonoswa pamberi paJehovha, wainzi Dhoegi, muEdhomu, mutariri wavafudzi vaSauro.
8Dhavhidhi akati kuna Ahimereki, "Hapana pfumo kana munondo kwamuri here? Nokuti handina kuuya nomunondo wangu, kana nhumbi dzangu dzokurwa nadzo, nokuti basa ramambo raifanira kukurumidzirwa."
9mupirisiti akati, "Munondo waGoriati muFirisitia, wawakauraya pamupata weEra, uri pano, wakaputirwa mumucheka mberi kweefodhi; kana uchida kuutora, chitora hako, nokuti hakuna mumwe asi iwoyo." Dhavhidhi akati, "Hakuna nomumwe wakafanana nawo, ndipe hoyo."
10Dhavhidhi akasimuka akatiza musi iwoyo nokutya Sauro, akaenda kuna Akishi, mambo weGati. 11Zvino varanda vaAkishi vakati kwaari, "Ko uyu haazi Dhavhidhi mambo wenyika here? Haazi iye wavakaimbira vachibvumirana pakutamba kwavo, vachiti,`Sauro wakauraya zviuru zvamazana ake, 12Dhavhidhi akarangarira mashoko iwayo mumoyo make, akatya kwazvo Akishi mambo weGati. 13Akashandura mugarire wake pamberi pavo, akazviita sebenzi pakati pavo, akakwara-kwara pamagonhi esuo, akarega mate ake achisiririka pandebvu dzake. 14Zvino Akishi akati kuvaranda vake, "Tarirai, munhu uyu ibenzi; mauyireiko naye kuno kwandiri? 15Ini ndinoshaiwa mapenzi kanhi, zvamauya nomunhu uyu kuzoratidza upenzi hwake pamberi pangu? Munhu wakadai ungapinda mumba mangu here?"